जाडोयाममा मोजा लगाएर सुत्ने बानी छ ? ज्यान पनि जान सक्छ ! - ramechhapkhabar.com
जाडोयाममा मोजा लगाएर सुत्ने बानी छ ? ज्यान पनि जान सक्छ !
नेपालमा जाडोयाम सुरु भैसकेको छ । जाडोमा मानिसहरु सुत्दा मोजा लगाएर सुत्छन् । आज हामी मोजा लगाएर सुत्नु किन नराम्रो हुन्छ भनेर चर्चा गर्न गइरहेका छन् । यदि जाडोमा चिसोबाट बच्न बाक्लो मोजा लगाएर सुत्नेहरु मध्ये तपाई पनि हुनुहुन्छ भने यो खबर तपाईको लागि मात्र हो । तपाईको यो बानीका कारण शरीरमा रक्तसञ्चारमा समस्या आउन सक्छ ।
यति मात्र होइन, मोजाका कारण शरीरको तापक्रम पनि छिटो बढ्न सक्छ र तपाईलाई अफट्यारो महसुस हुन सक्छ । त्यसका साथै नशाहरूमा लामो समयसम्म दबाब परेका कारण सास फेर्न कठिनाइ हुने गर्दछ । त्यहाँ हामी तपाईलाई राती मोजा लगाएर सुत्दा के–कस्ता हानि हुन्छ भनेर बताउन गइरहेका छौं । यस्ता छन् राति मोजा लगाएर सुत्नुको बेफाइदा राति मोजा लगाउनुका बेफाइदाहरू
रक्तसञ्चारमा समस्या : तपाईंलाई भनौं कि यदि तपाई राति कसिलो वा बाक्लो मोजा लगाएर सुत्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको कारणले तपाईको पैतला र खुट्टाको बीचमा रक्तसञ्चार रोकिन्छ । तपाईको खुट्टामा झनझन वा दबाब महसुस हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा तपाईलाई कडापनको समस्या पनि हुन सक्छ ।
स्वच्छता समस्या : यदि तपाईं दिनभरि मोजा लगाएर हिँड्नुहुन्छ र राती सोही मोजा लगाएर सुत्नुहुन्छ भने, दिनभरको धुलो र माटोले तपाईंको छालामा एलर्जी हुन सक्छ।
धेरै तातो हुने समस्या : यदि तपाई रातभर मोजा लगाएर सुत्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अत्यधिक तातो हुने समस्या हुन सक्छ, जसकारण तपाईको शरीरको तापक्रम अचानक बढ्न सक्छ । त्यसले तपाईंलाई असहज महसुस गराउन सक्छ ।
मुटुमा असर गर्छ : यदि तपाईं धेरै कडा मोजा लगाएर सुत्नु हुन्छ भने, त्यसले खुट्टाको नशाहरूमा दबाब दिन्छ । त्यस्तो गर्नाले हृदयमा रगत पठाउन गाह्रो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा मुटुमा रगत पठाउन बढी बल लगाउनुपर्छ, जसले मुटुमा क्षति पु-याउन सक्छ ।